Nootropic Coluracetam: Ahoana ny fomba fiasa amin'ny ati-doha sy fitsaboana ny fanahiana
/Blog/Gallery/Nootropic Coluracetam: Ahoana ny fomba fiasa amin'ny ati-doha sy fitsaboana ny fanahiana
Posted on 03 / 17 / 2021 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
Fianakavian'i Racetam an'ny Nootropic– Coluracetam
Coluracetam (BCI-540, na MKC-231) dia nootropic tsy mety matavy ao amin'ny kilasy racetam-class. Coluracetam dia matanjaka kokoa noho ny racetam tany am-boalohany, Piracetam. Coluracetam dia natolotry ny Mitsubishi Tanabe Pharma avy any Japon tamin'ny 2005. Ny fanaovana azy ho iray amin'ireo nootropika vaovao mifototra amin'ny racetam.
Ny patanty ho an'ny Coluracetam dia amidy any amin'ny BrainCells, Inc. any San Diego, California. BrainCells dia orinasa biofarmasialy tsy miankina manokana izay manampahaizana manokana amin'ny fampiroboroboana fitambarana fikarakarana fikorontanana lehibe (MDD), ny fahaketrahana manohitra ny fitsaboana (TRD), ary ny Arzheimer's Disease.
Coluracetam dia mitovy amin'ny endriny amin'ny Piracetam. Ary toy ny nootropics racetam rehetra dia manana atiny pyrrolidone ao anatin'ny fotony. Ny fikarohana ara-pahasalamana farany dia manondro ny mety hitsaboana aretin-tsaina mahakivy, ary ny fahasimban'ny retina sy ny nerveuse.
Coluracetam dia matanjaka be cholera mikendry ny mpisolo toeranat. Manatsara ny fiovan'ny choline ao amin'ny ati-doha ho acetylcholine (ACh) amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fandraisana ny choline (HACU) ambony. Izay mampitombo ny fahamailoana, ny fiheverana ny antsipiriany ary ny fahatsiarovana.
Ny fikarohana sasany, ary ny zavatra niainanao manokana dia mampiseho fa mety hisy fiantraikany amin'ny mpitsabo AMPA ny Coluracetam. Ny fanaovana azy ho ampotine mety ampotine. Izay afaka manazava ny vokatra toy ny stimulant raha tsy misy ny voka-dratsin'ny stimulants nentin-drazana. Coluracetam koa dia mampiseho toetra mampihetsi-po (manohitra ny tebiteby) izay manampy amin'ny fanatsarana ny toe-po sy ny fitaintainanana.
Ahoana Coluracetam Works(Mekanismen'ny hetsika)
Toy ny ankamaroan'ny fitambarana racetam, coluracetam (CAS:135463-81-9) miasa indrindra amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny neurotransmitter acetylcholine, izay mifamatotra mafy amin'ny fianarana, ny fitadidiana ary ny fahalalana.
Na izany aza, tsy manam-paharoa ny fomba ialan'ny coluracetam ny haavon'ny acetylcholine. Matetika, ny racetams dia miteraka famokarana acetylcholine amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo mpandray mandray sahaza azy, fa ny coluracetam dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fandraisana choline avo lenta, na HACU. Ny rafitra HACU dia mamaritra ny taham-pahavitrihan'ny choline natsonga ho neurons hovana ho acetylcholine.
Amin'ny fampitomboana ny taham-pahavitrihan'ny kôlôla ao amin'ny selan'ny nerve, ny coluracetam dia mampiroborobo ny famokarana acetylcholine ary mitombo ny haavon'ny atidohan'ity neurotransmitter ity. amin'ny fahazoana haingana ny choline ho an'ny fandraisana.
Miaraka amin'ireto fihetsika ireto dia mitarika amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny acetylcholine, izay mifandraika amin'ny fahalalana sy fahatsiarovana nohatsaraina.
soa ary Effects Of Coluracetam
❶ Manatsara ny fitadidy sy ny fianarana ny Coluracetam
Ny tombony Coluracetam dia manaporofo ny asany amin'ny fanamafisana ny fiasan'ny kognita sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny voalavo ary ny vokatra mitovy amin'izany amin'ny olombelona. Brain Cells Inc. dia nanao fanadihadiana izay manambara ny fanatsarana ny saina amin'ny voalavo taorian'ny nahazoany AF64A nandritra ny valo andro. Ny fampandrosoana dia nitohy naharitra na dia nihoatra ny fitsaboana aza. Aretin'i Alzheimer mitarika amin'ny ambaratonga acetylcholine ambany. Amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny acetylcholine ao amin'ny hippocampus, ny coluracetam dia hampitombo ny soritr'aretin'ny aretin'i Alzheimer toy ny aretin-tsaina sy ny fahatsiarovana tsy dia tsara loatra.
❷ Coluracetam dia mampihena ny fahaketrahana miady amin'ny fitsaboana
Tamin'ny fandinihana olona 101 voan'ny fahaketrahana, izay tsy nahomby tamin'ny fitsaboana ny antidepressants, dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana tamin'ny 80 mg 3 isan'andro isan'andro. Na izany aza, io ihany no fianarana momba ny olombelona. Ny fahafaha-mitazona azy io mba hampihenana ny fahamendrehana glutamate dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fiatraikany tsara amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana.
❸ Coluracetam dia mampihena ny fanahiana
Ao amin'ny fandalinana voalavo, ny doka 21 andro amin'ny coluracetam dia mampiseho fivoarana 20% amin'ny tebiteby, izay avo kokoa noho ny fiantraikan'ny valium 12% tamin'ny doka tokana tamin'io fandinihana io ihany.
❹ Coluracetam Mampiroborobo ny Neurogenesis
Ny fandinihana sasany dia milaza fa manampy amin'ny neurogenesis izy io. Ny mekanisma voalohany dia mbola tsy mazava, saingy misy ifandraisany amin'ny fitantanana azy mandritra ny herinandro maromaro, izay fitomboan'ny acetylcholine ao amin'ny faritry ny hipopotampia. Ny mekanisma dia tsy fantatra, nefa heverina fa misy ifandraisany amin'ny fitomboan'ny acetylcholine hippocampal rehefa mihinana isan'andro ny coluracetam mandritra ny herinandro vitsivitsy.
❺ Coluracetam Manampy amin'ny Schizophrenia
Ny Coluracetam dia mampitombo ny asan'ny ChAT amin'ny voalavo miaraka amin'ny fahasimban'ny sela nerveuse. Ity fiakarana ity dia manondro fa mety hahasoa ireo marary schizophrenia amin'ny alàlan'io anzima io ihany. Fikarohana bebe kokoa momba ny olona manana schizophrenia no mandeha.
❻ Coluracetam Manatsara ny fahitana
Coluracetam dia naneho ny tanjany optika toy ny fanatsarana ny fanekena ny loko, ny fahitana ary ny mazava. Manokana izany dia mampiroborobo ny fitomboan'ny hozatra ho an'ny aretin-tratra mihena. Fikarohana marobe no milaza ny fahitana loko tsara kokoa sy ny fanamafisana ny mason'ny maso, saingy tsy nisy fikarohana ara-tsiansa nanamafy izany.
AASraw no mpanamboatra matihanina an'ny Coluracetam.
Ahoana no fiasan'ny Coluracetam ao amin'ny atidoha?
Ny Coluracetam dia manatsara ny fahasalaman'ny ati-doha amin'ny fomba maro. Fa misy roa manokana miavaka.
Mampitombo ny ati-dohanao ny Coluracetam'Ny fandraisana ny choline amin'ny alàlan'ny fikendrena sy ny fiasa miaraka amin'ny fizotry ny fandraisana ny choline (HACU) avo lenta ao amin'ny neurônan'ny ati-doha.
Ny acetylcholine (ACh) dia misy choline sy acetate. Ireo dia tsy maintsy misy amin'ny terminal neuron amin'ny fotoana rehetra. Ka ny ACh dia azo foronina isaky ny ilaina izany.
Ny choline maimaim-poana mivezivezy ao amin'ny ra dia mamaky ny sakana amin'ny ati-doha. Ary raisin'ny terminal neuron cholinergic. Izy io dia tafiditra ao amin'ny neuron amin'ny alàlan'ny rafitra fiakarana ambony (HACU). Ny fampifangaroan'ny ACh dia mitranga ao amin'ny haavo synaptika. Ny elanelana misy eo amin'ny neurons rehefa mandehandeha any amin'ny neurona izy io.
Ny rafitra HACU dia miankina amin'ny mari-pana, ny angovo ary ny sodium. Ity rafitra ity no fitaovana voalohany hampiasana ny kôlôly ilaina amin'ny fampidirana ACh ao anaty neuron. Ary io no dingana mametra ny taha amin'ny famokarana ity neurotransmitter mpitsikera ity, rehefa rava ity rafitra ity na tsy mandeha amin'ny fomba mahomby tahaka ny namoronana azy, dia miaina olana amin'ny fahatsiarovana, ny fianarana ary ny zavona amin'ny ati-doha ianao.
Ny Coluracetam dia mandaitra ity fizotrany ity ary manampy azy hiasa amin'ny fomba mahomby kokoa. Raha ny marina dia toa manatsara ny fizotran'ny HACU izany. Na dia amin'ny neurons simba aza. Ny fitomboan'ny acetylcholine amin'ny neurons dia manampy amin'ny fanatsarana ny fitadidiana, mampiroborobo ny fahalalana ary manome fahaiza-manao fanapahan-kevitra tsara kokoa.
Ny Coluracetam koa dia toa manatsara ny potentiation AMPA. Ireo mpitsabo AMPA dia voan'ny glutamaty. Izay miasa ao amin'ny atidoha sy ny rafi-pitabatabana afovoany hanatsarana ny fahamailoana sy ny fahalalana.
Ny Coluracetam dia miasa miaraka amin'ny fanamafisana ny AMPA sy ny fanamafisana ny fampiakarana choline. Ity fifangaroana ity dia toa manampy amin'ny fanatsarana ny aretin-tsaina nefa tsy misy fiantraikany amin'ny haavon'ny serotoninina.
Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) no fomba fitsaboana mahazatra mahazatra indrindra hiatrehana ny aretin-tsaina sy ny fahaketrahana. Izy ireo dia miaraka amin'ny lisitry ny voka-dratsy manimba. Ary aza miasa ho an'ny marary ketraka rehetra.
Nilaza ny mpikaroka fa nahasoa an'i Coluracetam ny fitsaboana ny fahaketrahana sy ny fikorontanan-tsaina. Tsy misy fiantraikany amin'ny haavon'ny serotonine ao amin'ny ati-doha. Ary tsy misy ny voka-dratsin'ny serotonine manelingelina.
Coluracetam Fampiasana: Dosage ary stack ho an'ny referansa fotsiny
Ny Coluracetam dia fitambarana izay tsy hita amin'ny sakafo ary tsy afaka mamokatra izany ny vatantsika. Noho izany, ny fomba tokana ahazoana tombony amin'ity molekiola ity dia amin'ny alàlan'ny famenony.
Coluracetam dia amidy amin'ny vovoka na kapsule amin'ny endrika mahazatra ary azo alaina am-bava. Ny dosie dia azo raisina sublingually (ambanin'ny lela) koa noho ny fandraisana azy haingana sy mahomby kokoa.
Koa satria ny coluracetam dia mpandraharaha mahery vaika indrindra, dia tsara ny manomboka amin'ny fatra vokany ambany indrindra. Raha hitanao fa mila mampitombo ny fatra hahatsapa ny tombony azonao, dia tokony hatao miandalana izany ary tsy tokony hihoatra ny 80mg.
Coluracetam dia tsy misy poizina ary heverina ho azo antoka ary azo leferina tsara. Misy ihany ny vokany tsy fahita firy mifandraika amin'ilay fitambarana, toy ny tebiteby, aretin'andoha, havizanana ary maloiloy. Ireo voka-dratsy ireo dia tsy fahita firy ary matetika dia mitranga izany rehefa tsy misy dobo mialoha ny choline mialoha azo ampiasaina hampiasaina amin'ny synthesia acetylcholine. Izany no antony anoloranay hevitra ny hanombohana ny coluracetam mampitombo ny synthesis amin'ny alàlan'ny enhancer choline toy ny citicoline.
Coluracetam dia afaka mifampiraharaha amin'ny fanafody sasany, indrindra ireo izay mifandray amin'ny receptor NMDA. Anisan'izany ny famonoana kohaka sy ny fanatoranana. Ireo akora hafa izay mifandraika amin'ny rafitra cholinergic, toy ny fanafody glaukoma sy nikôtinina, dia mety hifandray amin'ny vokatry ny coluracetam. Coluracetam dia afaka manohitra ny vokatry ny fanafody anti-cholinergic (toy ny sasany Benadryl, antipsychotics sasany ary ny fanafody Parkinson).
Toy ny fanafody fanampiny, raha marary fanafody ianao na manana aretina, dia tsara ny miresaka amin'ny dokoteranao alohan'ny hanombohanao. fanampin fitondrana.
※ Ahoana no Stacks Well With Zava-mahadomelina hafa
♦ Coluracetam dia molekiola mora vonoina, noho izany dia tsara indrindra mifangaro tavy mahasalama toy ny voanio na menaka MCT.
♦ Coluracetam dia tokony apetraka miaraka a choline supplement toy ny citicoline. Citicoline dia mampitombo ny dobo misy choline misy ho an'ny synthesis. Ny stack dia mety hiteraka vokatra mahery amin'ny fampitomboana ny choline (citicoline) misy ary ny fahaizana mampifangaro azy io ho acetylcholine (coluracetam).
※ Dosis voatondro: 5-80mg isan'andro
Manoro hevitra izahay eo anelanelan'ny 5-80mg coluracetam isan'andro.
Ny fetra farany azo antoka ho an'ny coluracetam dia 80mg isan'andro. Na izany aza, mamporisika ny hijanona miaraka amin'ny 35mg isan'andro izahay satria ny vokatry ny fatra ambony dia mbola tsy voadinika tanteraka amin'ny olombelona.
Tsara ny manasaraka ireo fatra ireo ho fatra maraina na tolak'andro. Ohatra, fatra 20mg 10mg amin'ny maraina ary 10mg fanampiny amin'ny tolakandro.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha dia tokony hanomboka amin'ny faran'ny ambany amin'ny ambaratonga fatra ianao. Ny fiantombohan'ny fatra mahomby farany ambany dia hampihena ny mety hitrangan'ny voka-dratsy.
Ny effets effet Coluracetam
Coluracetam dia tsy misy poizina. Ka dia heverina ho azo leferina sy azo antoka. Mpampiasa voalohany voalohany ao amin'ny Coluracetam no mitatitra ny havizanana izay matetika vokatry ny fanombohana fatra be loatra.
Aza adino, Coluracetam dia miasa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fandraisana choline ao amin'ny atidohanao. Choline dia mpialoha lalana amin'ny famokarana acetylcholine. Raha tsy ampy ny kôlôla ao amin'ny rafitrao dia hahatsapa ny vokany ianao.
Ny aretin'andoha amin'ny fampiasana Coluracetam dia matetika mitranga rehefa manadino ny fampifangaroana azy ianao amin'ny famenony choline tsara. Ny aretin'andoha dia matetika famantarana ny tsy fahampian'ny choline ao amin'ny atidohanao.
Coluracetam dia iray amin'ireo mpikambana vaovao sy tsy dia mahazatra loatra amin'ny kilasy racetam an'ny nootropics, fa ankafizin'ny mpampiasa maro io.
Mampitombo ny haavon'ny acetylcholine '' mianatra neurotransmitter '', izay mety hampiroborobo ny fahalalana, ary ny fandinihana biby dia mampiseho fa afaka manonitra ireo tsy fahatsiarovana tsy misy fiatraikany lehibe. Na dia misy aza ny fikarohana ataon'ny olombelona kely momba ny coluracetam, ny fanadihadiana misy dia manondro fa mety ho fitsaboana sarobidy amin'ny fitaintainanana sy fahaketrahana.
Mpampiasa maro no mihevitra azy io ho toy ny mpamindra toe-po azo antoka sy fampitomboana fahatsiarovana izay manome azy ireo fifantohana sy fifantohana tsara kokoa. Ny sasany kosa milaza fa manome azy ireo ny mitovy amin'ny "fahitana HD", mampamirapiratra kokoa ny loko, mifanohitra matanjaka kokoa, ary ny jiro mirehitra kokoa.
Coluracetam dia fitambarana mahery, ka ambany ny habetsahan'ny fatra, ary fantatra fa miasa haingana izy io. Amidy amin'ny sakafo ara-tsakafo fanampin any Etazonia ary azo ampidirina ara-dalàna any Canada sy UK amin'ny vola kely.
Mbola betsaka ny zavatra tokony hianarana momba ny coluracetam, saingy toa azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany rehefa raisina am-pitokisana. Raha liana te hanampy zava-baovao sy hafa amin'ny anao ianao fifandonana nootropika, coluracetam dia mety ho iray hodinihina.
Coluracetam dia tsy manana fikarohana marobe, ny fandinihana azo atao dia mampiseho ny mety hampiasana azy. Izy io dia iray amin'ireo racetams vao haingana indrindra, miaraka Fasoracetam. Na izany aza, tato ho ato, ny FDA dia nanaiky ny endrika "nohatsaraina" an'ny Fasoracetam ho an'ny fitsaboana ADHD.
 Brauser D. "Compound-stimulus neurogenesis dia mampiseho fampanantenana amin'ny fitsaboana ny famoifoizana lehibe" Medscape Medical News 21 septambra 2009
 Murai S., Saito H., Abe E., Masuda Y., Odashima J., Itoh T. "MKC-231, fampitomboana ny fampiasana choline, dia manatsara ny tsy fahatomombanan'ny fahatsiarovan-tena ary nampihena ny acetylcholine hippocampal nateraky ny ion azilidinium étholéchine. Gazetin'ny fizarana ankapobeny momba ny fifindran'ny neural. 1994; 98 (1): 1-13.
 Takashina K., Bessho T., Mori R., Eguchi J., Saito K. "MKC-231, fanamafisana ny fampiakarana choline: (2) Ny fiatraikany amin'ny synthesis sy ny famotsorana acetylcholine ao amin'ny voalavo voadidy AF64A." Gazety fandefasana neural (Wina). 2008 Jul; 115 (7): 1027-35.
 Bessho T., Takashina K., Eguchi J., Komatsu T., Saito K. "MKC-231, fanamafisana ny kolika: (1) fanatsarana ny faharetana maharitra aorian'ny fitantanana miverimberina amin'ny voalavo voan'ny AF64A." Gazety fandefasana neural (Wina). 2008 Jul; 115 (7): 1019-25.
 Akaike A., Maeda T., Kaneko S., Tamura Y. "Vokatry ny fiarovana ny MKC-231, fampiroboroboana ny kolosiana avo lenta, amin'ny cytotoxicity glutamate amin'ny neurons kortical kolontsaina." Gazety japoney momba ny farmasia. 1998 feb; 76 (2): 219-22
 Shirayama Y, Yamamoto A, Nishimura T, Katayama S, Kawahara R (Septambra 2007). "Ny fihenan-tsakafo manaraka ny fanamafisana ny choline MKC-231 dia manohitra ny fihenan'ny fitondran-tena ateraky ny phencyclidine sy ny fihenan'ny neuron cholinergic septal amin'ny voalavo". Neuropsychopharmacology eoropeana. 17 (9): 616–26.
 Fanomezana mari-pahaizana momba ny fitsaboana Therapeutic Discovery ho an'ny State of California, IRS.gov.
 Malykh, AG, & Sadaie, MR (2010). Zava-mahadomelina toy ny Piracetam sy Piracetam. Zava-mahadomelina, 70 (3), 287–312.
Curcumin Derivative J-147 mitsabo AD, fanoherana ny fahanterana, aretina mikorontana (MDD) Zava-mahadomelina kendrena Ibrutinib: Inona no fantatrao